I-China i-3D Embossing ngakumbi yeNdalo engenamanzi i-WPC Decking manufacturers kunye nabathengisi ULihua
I-3D Embossing engakumbi yeNdalo engenamanzi i-WPC Decking
Ubunini beemveliso:Ukuhamba kwe-3D WPC
Into No:MG54133, intsimbi
Ixabiso:$ 2.45 / uM
Umbala:Ngwevu, Teak, amalahle, itshokholethi, brown, njl
Ixesha lokukhokhela:Iintsuku eziyi-8-16
2.4m, 3.6m, okanye wena
Intendelezo, iGadi, iPaki
Itekhnoloji ye-1 entsha ye-3D embossing ye-WPC yangaphandle yomhombiso, ukuphucula ukuhombisa. Itekhnoloji ye-3D embossing yindlela ekhohlakeleyo yokwenziwa. Umgangatho ngamnye uyafana nomfanekiso oqingqiweyo, kwaye imeko yobugcisa kunye nenqanaba lokubonakalayo liphuculwe kakhulu. I-Classical 3D embossing luphuculo olukhulu kumgangatho weplastiki obonwayo, ongenakuphinda ukrolwe kuphela ngamabhanti kodwa uxhase umkhondo wesiqalo sokukhonkotha.
2. Yesintu Umgangatho we-wpc wokuhombisa Kulula ukuphulukana neenkozo ngaphezulu, ukuhonjiswa kwe-super embossed kwenza ngcono kunayo nayiphi na imithi ehlanganisiweyo, kungokwemvelo kwaye kunomtsalane, ukubuna okungcono kunye nokukrwela okunganyangekiyo.
3.Ukugqwesa okuphezulu kukaLihua Ukuhonjiswa kweWPC unazo zonke izibonelelo zesiko Ukuhombisa okudityanisiweyo , isagcinwa: ayinamanzi, inxamnye ne-UV, imozulu iyanyangeka, inqanda umhlwa, ukuthintela izinambuzane, isondlo esiphantsi, ubomi obude benkonzo njlnjl. Kwaye iibhodi ezinemithambo enzulu zijongeka kwaye ziziva ngathi zinkuni zendalo ngenxa yonyango lwe-3D umphezulu.
Egqithileyo I-3D Embossing yeMozulu yokuXhathisa iMozulu edibeneyo
Okulandelayo: Uthintelo lwezinambuzane ezinokuphinda zisebenze Iplastiki yeWPC yokuHamba
Ukutsalwa okuphezulu okuhonjisiweyo
WPC decking edityanisiweyo, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC decking ngaphandle, WPC decking umgangatho, WPC nokwadala,